နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၄ | 2013 ၏စာမျက်နှာ4NAB သတင်းများ | 69 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2013 » နိုဝင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 4)
လစဉ်မော်ကွန်း: နိုဝင်ဘာလ 2013
SMPTE တစ်ဦးရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအသုံးစရိတ်အားပေးပါရန်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် #GivingTuesday လပ်ြရြားမြပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
နိုဝင်ဘာ 3, 25 - - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (SMPTE), motion- အတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်များ၏ Society ကပေးကမ်း၏ဒီဇင်ဘာ 2013 နေ့လှူဒါန်းမှုများပညာရေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းလုပ်ငန်းခွင် White Plains, နယူးယော့အတွက် SMPTE ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်တူရိယာဆိုင်ရာ Are ဒါကအစွမ်းထက်သတိပေးချက်ပေး ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပညာရေး, ယနေ့ပြုလုပ် #GivingTuesday ပူးပေါင်းခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့သည် ...
အွန်လိုင်း streaming များက်ဘ်ဆိုက်များ '' အမြောက်အများအပ်လုဒ်ရွေးချယ်မှုတီဗီဒိုင်းနမစ်ကိုပြောင်းလဲ - Daily သတင်းစာ Nebraskan
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ EditionOnline streaming များက်ဘ်ဆိုက်များအဖြစ်ကောင်းစွာ "50s, ကဲ့သို့သောလူကြိုက်များ programming ကို" ကျွန်မ Lucy ချစ် "," အဆိုပါပျားရည်ဆမ်းခရီး "နှင့်" Gunsmoke '' အမြောက်အများအပ်လုပ်တင်ထားသည်များ, ရွေးချယ်မှုများအတွက်ခုနှစ်တွင်တီဗီဒိုင်းနမစ်နေ့စဉ် Nebraskan ကိုပြောင်းလဲ '' ထိုကဲ့သို့သော www.dailynebraskan.com အပေါ်အက်ဒွပ် R.See အဖြစ်အစောပိုင်းသတင်းထုတ်လွှင့်အဖြစ်
iZotope မာစတာ Q & A စီးရီး, အပိုင်း 1: ချားလ်စ် Deenen, အသံ၏မာစတာ: ဗီဒီယိုဂိမ်းများ
Deenen ဂိမ်းဒီဇိုင်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်မည်သို့အသံထုတ်ယူခြင်းအမြဲကိန်းဘရစ်ချ် MA, နိုဝင်ဘာလ 25, 2013 ထက် သာ. ကောင်း၏ဖြစ်ပါသည်: ချားလ်စ် Deenen အဆိုပါဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ဉီးသံကိုဒီဇိုင်နာများနှင့်ရောနှောတဦးဖြစ်ပါသည်, မြန်နှုန်းစီးရီးများအတွက်လိုအပ်နေသောူပည်သူနဲ့တူခရက်ဒစ်နှင့်အတူထပ်မံကျ, စတား Trek နှင့်Duty®၏ကို Activision ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုအပေါ်သူ၏ထောက်ခံမှု: Ghost ။ ဗိုလ်မှူးချုပ်တစ်သံကိုယာဉ်မောင်းရေးသားခြင်းကတည်းက ...
Desk ရောစပ် solid state logic Matrix2- Mixdown မဂ္ဂဇင်း
နယူးယောက်ရှိ 2013 AES ပြရန် Solid State Logic ရဲ့ Matrix2၏မိတ်ဆက်ကိုမြင်တော်မူ၏။ သူတို့ရဲ့မြင့်မားလူကြိုက်များစပ်ထုတ်လုပ်မှု console ကိုဒီသစ်ကိုတည်းဖြတ်မူအစွမ်းထက် features အသစ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန် updated သိရသည်။ mixdownmag.com.au အပေါ်ကိုကြည့်ပါ
AMPAS သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကောင်စီအပေါ်အမှုတော်ကိုထမ်းရွက်ရန်လေး SMPTE အဖွဲ့ဝင်များဖိတ်ခေါ်
နိုဝင်ဘာ 21, 2013 - - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ (SMPTE), ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်များ၏ Society က SMPTE အဖွဲ့ဝင်များ Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံကောင်စီ White Plains, နယူးယော့၏အကယ်ဒမီမှထပ်တိုးအသစ်များအများစုကိုယ်စားပြု ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ယနေ့ယင်း၏အဖွဲ့ဝင်လေးကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် - Wendy Aylsworth ...
Denon Professional ကအခုတော့သင်္ဘော DN-700R ကွန်ယက် SD က / USB မှတ်ပေး Audio Recorder
နယူးကွန်ယက်အဖွဲ့စှမျး Simplified မှတ်တမ်းတင်, မော်ကွန်းများ, အသံဖိုင်တွေကို ITASCA, မကျန်းမမာ၏ဖြန့်ဖြူး - ။ နိုဝင်ဘာ 21, 2013 - Denon Professional က, ပရော်ဖက်ရှင်နယ် application များအတွက်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်များတစ်ဦးဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့က၎င်း၏အသစ်အ DN-700R ၏ရရှိမှုထုတ်ပြန်ကြေညာ ကွန်ယက်ကို SD က / USB အသံအသံဖမ်း။ အသံ applications များ၏ယနေ့ဖွင့်ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးအတွင်းမှတ်တမ်းတင်လွယ်ကူချောမွေ့ဖို့ဒီဇိုင်း, အ DN-700R မှတ်တမ်းများနဲ့ WAV နှင့် ...
Calrec ဗိုလ်မှူးဆော့ဝဲအင်္ဂါရပ်များ၏နယူး Suite နှင့်အတူ Upgrade ကြေညာ
HEBDEN တံတား BRIDGE, ဗြိတိန် - နိုဝင်ဘာ 21, 2013 - Calrec အသံ consoles စ၎င်း၏ Bluefin2 အကွာအဝေးများအတွက်အဓိကဆော့ဖ်ဝဲကိုအဆင့်မြှင့်တင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အဆိုပါ Apollo နှင့်အာတေမိပလက်ဖောင်းယခုခေတ်သစ်ထုတ်လွှင့်များ၏ပြောင်းလဲနေတဲ့ဒိုင်းနမစ် လိုက်. နောက်ထပ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေး features နဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုများအသစ်တစ်ခု suite ကိုပါဝင်သည်။ "Calrec အားလုံး၎င်း၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူ၎င်း၏အနီးကပ်အလုပ်လုပ်ဆကျဆံရေးအပျေါသူ့ဟာသူ prides ။ ...
'' တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ် '' သည်ရွေးချယ်ထားသော Sachtler - 4RFV
Scoop.it အပေါ်ကိုကြည့်ပါ - အသံလွှင့်မဂ္ဂဇင်း Beat, Daily သတင်းစာ Edition4RFV Sachtler '' တစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံသောပွဲစဉ် '' 4RFV Kinsky Sachtler ထံမှကင်မရာကိုထောက်ခံမှုရှေးခယျြခဲ့သည်ရွေးချယ်ထားသော, www.4rfv.co.uk အပေါ်ဓာတ်ဆီ Bags.See ထံမှ Litepanels နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများသယ်ဆောင်ထံမှ LED မီးအလင်းရောင်
4 ၏စာမျက်နှာ 69«ပထမဦးစွာ...«23456 » 102030...နောက်ဆုံး»